राजनीति गर्न कस्तो किसिमको योग्यता आवश्यक छ ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः श्रावण ८, २०७४ - साप्ताहिक
हरेक कामलाई सरल ढंगबाट सम्पादन गर्न सक्ने अनि दूरदर्शी व्यक्ति हुनुपर्छ ।
- निर्मल नेपाल
अबको राजनीति अहिलेकै भाषा बोल्न जान्नेले गरेको राम्रो । शास्त्रीय सिद्धान्त, जेलनेलको इतिहास, बलिदानको रापजस्ता योग्यता अब जरुरी नहोस् ।
कुनै पनि योग्यतासहितको प्रमाणपत्रबिना गर्न पाइने पेसा हो— राजनीति । त्यसैले राजनीतिमा योग्यता अनिवार्य गर सरकार !
- म मौसम
मान्छे मार्नु, बम पड्काउनु, चोर्नु, ठग्नु, लुट्नु, उखानटुक्का भन्नु, भ्रष्टाचार गर्नु भनेको राजनीति गर्न चाहिने योग्यता हुन् रे— हैट् ।
- डिभाइडेड बाइ जेरो
कम्बल ओढेर घिउ खानेका बच्चाहरूले न पढ्न जरुरी छ न भोलि पढाइ उपयोग गरेर जीवन निर्वाह गर्न नै, नेपालमा राजनीति गर्न शैक्षिक योग्यता चाहिँदैन ।
- लामिछाने गुरु
राजनीति गर्न, मन्त्री बन्न र सरकारी जागिर खान विशेष योग्यता एवं क्षमता हुनुपर्छ । आरक्षण दिएर हुँदैन र यी विषयमा आरक्षण माग्नु पनि हुँदैन ।
नेपालमा शिक्षक, पाइलट, डाक्टर, इन्जिनियर बन्नदेखि लिएर यातायातका साधन चलाउनसम्म शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ तर देश चलाउने राजनीति गर्न शैक्षिक योग्यता नचाहिने रहेछ ।
- कृष्णप्रसाद भुसाल
सारा काम गर्न, जागिर गर्न योग्यता तोकिन्छ, योग्यताअनुसार काममा लगाइन्छ तर यो राजनीति गर्न, मन्त्री–राष्ट्रपति बन्न किन योग्यता तोकिँदैन ?
- गाउले केटो
नेपालमा च्याउ पलाएझैँ राजनैतिक पार्टी छन् । यसलाई कम गर्न थेर्स होल्ड र देशको मुख्य मन्त्रालय हाँक्ने नेताको शैक्षिक योग्यता नतोक्नु नै देश नबन्नु हो ।
- राज धराने
मलाई पनि राजनीति गर्ने मन त थियो, तर कतैबाट पनि अफर आएन । ढुंगा हान्ने योग्यता छैन । उग्रवादी कुरा गर्न आउँदैन । आ, ट्विट लेखिन्छ, बसिन्छ ।
चालक हुन, पियन हुन, पुलिस बन्न योग्यता चाहिन्छ, तर राजनीति गर्न औंठा छाप
थर्काउन सक्ने, ढाँट्न सक्ने, शैक्षिक योग्यता खासै नचाहिने र भ्रष्टाचार गर्न सक्नेहरूका लागि एउटै मात्र पेसा हो, राजनीति ।
- उज्ज्वल खनाल
जेल सजाय पाएको, जिब्रोमा करेन्ट लागेको, सबैलाई उल्लू बनाउन सक्ने, शरीरको राँै सबै फुलेर सेतो भा’को, अनुहार कम्तीमा पाँच ठाउँमा कुच्चिएको । यति भयो भने खतरनाक नेता बन्छ जो पनि ।
- जीवन थापा
औपचारिक शिक्षाको सुरुवात गरी प्रमाणपत्र बाँड्ने काम पश्चिमाहरूले गरेका हुन् । यता पूर्वीय सभ्यतामा ऋषिमुनिहरू योग, ध्यान, साधना, गुरुकुल शिक्षा वा स्वअध्ययनबाट अघि बढेका थिए । गौतम बुद्धले कुनै विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिएनन् । हाम्रा वीर पुरुषहरूसँग कुनै डिग्री थिएन ।
कस्तो हुनेछ समापन समारोह ?
सिफारिस र भनसुनमा भइँदैन लाहुरे
यसपालिको विश्वकप फुटबल कसले जित्छ र किन ? असार ३१, २०७५
राति फुटबल हेर्दा तपाईंको दिनचर्या कत्तिको बिथोलिन्छ ? असार २४, २०७५
विश्वकप फुटबलमा कत्तिको बाजी राख्दै हुनुहुन्छ ? असार १६, २०७५
वल्र्डकप कसले जित्छ जस्तो लाग्छ ? किन ? असार १०, २०७५
विश्वकप कसले जित्छ जस्तो लाग्छ ? किन ? असार ६, २०७५
विश्वकप कसले जित्छ जस्तो लाग्छ ? किन ? जेष्ठ २७, २०७५
तपाईंको राशिफल कत्तिको मिल्छ ? जेष्ठ २२, २०७५
महिलामाथिको दुव्र्यवहार घटाउन के गर्नुपर्ला ? जेष्ठ १४, २०७५
तपाईं साप्ताहिकलाई अब कस्तो स्वरूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ ? जेष्ठ ७, २०७५
महिलामाथिको दुव्र्यवहार घटाउन के गर्नुपर्ला ? वैशाख ३१, २०७५